Provironum (ပရိုဗာရိုနမ်) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Provironum (ပရိုဗာရိုနမ်)
Provironum (ပရိုဗာရိုနမ်) ကဘာလဲ။
Generic Name: Provironum (ပရိုဗာရိုနမ်) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Provironum (ပရိုဗာရိုနမ်) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Provironumကို အသုံးများတဲ့ အခြေအနေတွေက..
သက်လတ်ပိုင်းနဲ့ အသက်ကြီးတဲ့ အမျိုးသားတွေရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကျဆင်းတဲ့အခါ ( androgen ဟော်မုန်းကျဆင်းခြင်း၊ စိတ်အာရုံစူးစိုက်မှုနည်းခြင်း၊ မှတ်ဉာဏ်အားနည်းခြင်း၊ လိင်စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ခြင်း၊ စိတ်မကြည်ခြင်း၊ အိပ်မပျော်ခြင်း၊ စိတ်ဓါတ်ကျခြင်းနှင့် တခြားအခြေအနေများ)
ဝှေးစေ့မှ Testosterone ဟော်မုန်းမထုတ်ခြင်း
Provironum (ပရိုဗာရိုနမ်) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူ ညွှန်ကြားတဲ့ အတိုင်းသေချာသောက်ပါ။ လက်ကမ်းစာစောင်တွေထဲက သတင်းအချက်အလက်တွေနဲ့တော့ ကွာခြားနိုင်ပါတယ်။
တကယ်လို့ သင်ဟာ ဆေးအညွှန်းကို နားမလည်လျှင် ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို မေးမြန်းအကူညီတောင်းနိုင်ပါတယ်။
နေ့တိုင်း အချိန်တူတူသောက်ခြင်းက အကောင်ဆုံး အာနိသင်ကို ရစေနိုင်ပါတယ်။ ဆေးသောက်ဖို့ကိုလည်း ပိုပြီးမှတ်မိစေနိုင်ပါတယ်။ အစာမစားမီဖြစ်ဖြစ်၊ အစားစားပြီးဖြစ်ဖြစ် ဆေးသောက်နိုင်ပါတယ်။
Provironum (ပရိုဗာရိုနမ်) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Provironum ကို နေရောင်နှင့်အစိုဓါတ် တိုက်ရိုက်ထိတွေ့စေမယ့် နေရာကရှောင်ပြီး အခန်းအပူချိန်မှာ ထိန်းထားတာက အကောင်းဆုံးပါ။ ဆေးပျက်ဆီးတာကို ကာကွယ်ဖို့ ဆေးကို ရေချိုးခန်းနှင့် ရေခဲသေတ္တာအခဲအကန့်ထဲ သိမ်းတာကို ရှောင်ရပါမယ်။
သိမ်းရမယ့်နေရာတွေမတူတဲ့ Proviroum ဆေးအမျိုးပေါင်းများစွ ာရှိနေနိုင်ပါတယ်။ သိမ်းတဲ့နေရာကိုသိဖို့ ဆေးအခွံပေါ်က အညွှန်းကိုဖတ်ခြင်း၊ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို မေးခြင်း ပြုလုပ်ပါ။ ဘေးကင်းစေဖို့ ဆေးကို ကလေးများ၊ အိမ်မွေးတိများနှင့် ဝေးရာတွင်ထားပါ။
Provironum (ပရိုဗာရိုနမ်) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
သင်ဟာ ဒီဆေးတွေနဲ့ ဓါတ်မတည့်ရင် Provironumကို မသုံးသင့်ပါဘူး
Mestrolone – Provironum ဆေးမှာပါတဲ့ ပါဝင်ပစ္စည်း
ဆေးအခွံပျက်ဆီးနေခြင်း၊ ပေါက်ပြဲနေခြင်းကိုတွေ့ပါက ဆေးကို မသုံးသင့်တော့ပါဘူး။ တကယ်လို့ ဆေးအခွံက ပျက်ဆီးနေလျှင် ဖျက်ဆီးဖို့ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူဆီကို ယူသွားပါ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Provironum (ပရိုဗာရိုနမ်) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
Provironum ကို အမျိုးသားတွေမှာဘဲ သုံးပါတယ်။
Provironum (ပရိုဗာရိုနမ်) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
သင်ဟာ အောက်ပါအကြောင်းများနှင့် ပတ်သတ်ပြီး စိတ်ပူတာရှိပါက ဆရာဝန်သို့ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို ပြောပါ။
စိတ်ကျန်းမာရေးနှင့်ဆိုင်သော ပြဿနာများ (ဥပမာ – စိတ်ဓါတ်ကျခြင်း၊ စိတ်တိုခြင်း၊ အားအင်တိုးခြင်း သို့ လျော့ခြင်း၊ စိတ်ကျေနပ်ခြင်း သို့မဟုတ် စိတ်မကြည်မလင်ဖြစ်ခြင်း)
သင်ဟာ အောက်ကအချက်တွေကို သတိပြုမိလျှင် နီးစပ်ရာဆေးရုံရှိ အရေးပေါ်ဌာနကို သွားပါ။ သို့မဟုတ် ဆရာဝန်ကို ချက်ခြင်းပြောပါ။
ဆီးကျိတ်ကြီးခြင်း ( ဆီးသွားရာတွင် ပြောင်းလဲခြင်း၊ ဆီးထဲသွေးပါခြင်း သို့မဟုတ် သုတ်ရည်ထုတ်ရာတွင် သွေးပါခြင်း
အလိုမရှိဘဲ မကြာခဏ သို့မဟုတ် အချိန်ကြာမြင့်စွာ လိင်တံထောင်မတ်နေပြီး နာကျင်မှုခံစားရခြင်း
ဟော်မုန်းတွေပါတဲ့ Provironum က ဟော်မုန်းရှိတဲ့ ဆဲလ်တွေ တစ်ရှူးတွေကို မြန်မြန်ကြီးထွားစေပါတယ်။ တကယ်လို့ သင့်အသက်က ၆၅နှစ်အထက်ဖြစ်လျှင် သင့်ဟာ ဆီးကျိတ်ကြီးဖို့ အခွင့်အလမ်းများပြီး ဆီးကျိတ်ကင်ဆာကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
ဘယ်ဆေးတွေက Provironum (ပရိုဗာရိုနမ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Provirunum ဆေးက သင်သုံးနေတဲ့ ဆေးနဲ့ ဓါတ်ပြုပြီး ဆေးအာနိသင်ပြောင်းခြင်း၊ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးပိုဖြစ်ခြင်းတို့ ဖြစ်စေနိုင်တယ်။ ဆေးဓါတ်ပြုမှုကို ရှောင်ဖို့အတွက် သင်သုံးနေတဲ့ ဆေးများ (ဆရာဝန်ညွှန်ကြားသောဆေး၊ ကိုယ့်ဘာသာသောက်နေတဲ့ဆေး၊ တိုင်းရင်းဆေး) အားလုံးကို စာရင်းလုပ်ထားပြီး ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို ပြသသင့်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့ဘေးကင်းမှုအတွက် ဆေးတွေကို ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်မပါဘဲ ကိုယ့်သဘောနဲ့ကိုယ် သောက်ခြင်း၊ ရပ်ပစ်လိုက်ခြင်း နှင့် ဆေးပမာဏပြောင်းခြင်းကို မလုပ်ပါနဲ့။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Provironum (ပရိုဗာရိုနမ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Provirunum ဆေးက အရက်၊ အစားအသောက်များနဲ့ ဓါတ်ပြုပြီး ဆေးအာနိသင်ပြောင်းခြင်း၊ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးပိုဖြစ်ခြင်းတို့ ဖြစ်စေနိုင်တယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဆေးမသုံးခင် ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို သင်စားနေတဲ့ အစားအသောက်နှင့် အရက်ကို ပြောပြသင့်ပါတယ်။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Provironum (ပရိုဗာရိုနမ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Provirunum သင့်ကျန်းမာရေး အခြေအနေနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ပါတယ်။ ဒါက သင့်ကျန်းမာရေးကို ပိုဆိုးစေနိုင်သလို ဆေးအာနိသင်ကိုလည်း ကျစေနိုင်ပါတယ်။ သင်လက်ရှိခံစားနေရတဲ့ ကျန်းမာရေးပြဿနာကို ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို ပြောပြဖို့ကလည်း အရေးကြီးပါတယ်။
သင်ဟာ အောက်ပါကျန်းမာရေးအခြေအနေတွေကို ခံစားနေရလျှင် ဆရာဝန်ကို ပြောပြပါ။
Porphyria( သွေးနီဥထဲရှိ ဓါတ်တမျိုး )
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Provironum (ပရိုဗာရိုနမ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
သောက်နိုင်တဲ့ အညွှန်းမှာ ဆေး ၁-၃ပြားကို နေ့စဉ်သောက်နိုင်ပါတယ်။ ရောဂါအခြေအနေ တိုးတက်လာလျှင် ဆေးကို လျှော့ချနိုင်ပါတယ်။
ဆေးစွဲသောက်ရန် – ဆေး၁ပြားကို တနေ့ တစ်ကြိမ် သို့မဟုတ် ၂ကြိမ် နေ့စဉ် သောက်နိုင်ပါတယ်။
ရောဂါအမျိုးအစားနဲ့ ပြင်းထန်မှုပေါ်မူတည်ပြီး ကိုယ့်လိုအပ်ချက်အလိုက် ဆေးကို ထပ်တိုးလို့ ရပါတယ်။ လပေါင်းများစွာ ကြာတဲ့အထိ ဆေးစွဲသောက်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
ဝှေးစေ့မှ Testosterone ဟော်မုန်းမထုတ်တဲ့ ရောဂါအတွက် ဆေးစွဲသောက်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
လူပျိုဖော်ဝင်ခြင်းရဲ့ ဒုတိယအဆင့်အတွက် ဆေး ၁-၂ပြားကို တနေ့ ၃ကြိမ် နှင့် လပေါင်းများစွာကြာအောင်သောက်ရပါမယ်။
စွဲသောက်ရမယ့်ပမာဏ – ဆေး ၁ပြားကို တနေ့ ၂-၃ကြိမ် နေ့စဉ်သောက်ဖို့ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
သုတ်ပိုးအရည်အသွေးနဲ့ အရေအတွက်များစေရန်အတွက် သုတ်ပိုးထုတ်တဲ့ အချိန်နဲ့လိုက်ပြီး ဆေး ၁ပြားကို တနေ့ ၂-၃ကြိမ် ရက်ပေါင်း ၉၀ သောက်သင့်ပါတယ်။ လိုအပ်လျှင် ရက်တွေခြားပြီး ထပ်သောက်သင့်ပါတယ်။
Postpubertal Leydig-cell မလုံလောက်တဲ့အခြေအနေမှာ သုတ်ထွက်တဲ့နေရာမှာ fructose ဓါတ်များစေရန်အတွက် ဆေး၁ပြားကို နေ့စဉ် လပေါင်းမျာစွာ သောက်သင့်ပါတယ်။
ကလေးတွေအတွက် Provironum (ပရိုဗာရိုနမ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
ကလေးတွေသုံးနိုင်တဲ့ ပမာဏကို ဖော်ပြထားတာမရှိပါဘူး။ ကလေးတွေသုံးဖို့ စိတ်မချရပါဘူး။ ဆေးကို မသုံးခင် ဘေးကင်းဖို့ကို သေချာ သတိထားရပါမယ်။ ထပ်မံသိလိုသောအချက်များရှိပါက ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူနှင့် တိုင်ပင်ပါ။
Provironum (ပရိုဗာရိုနမ်) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
Provironum( mesterolone)ကို အောက်ပါပုံစံနှင့် ပြင်းအားအတိုင်းရနိုင်ပါတယ်။
သောက်ဆေးပြား, Mesterolone ၂၅မီလီဂရမ်